Bixi Khibradda Martida ee Ugu Fiican Macaamiishaada Kireynta Fasaxa
Features » Khibrad Marti
Keen khibrad marti ah oo heer sare ah oo leh Zeevou oo u fiirso meheraddaadu inay ka kororto xoog ilaa xoog!
Khibradda martida ayaa ku saabsan dejinta rajooyinka, ka dibna gaarsiinta himilooyinkaas. Martidu waxay qoreysaa guryo la adeegsaday iyo guryo fasax ah oo laga helo marti-geliyeyaasha iyada oo loo marayo marinno kala duwan - bogagga liistada, OTAs, ama si toos ah shabakadda, taleefan, ama emayl.
Marti kastaa wuxuu soo maray qayb ka mid ah habka ballansashada ee martidu u baahan tahay, si kastaba ha noqotee way ku adag tahay martida martigelinta inay shakhsiyeeyaan khibrada martida iyadoo kuxiran qaybaha buugaagta.
Qaar ka mid ah OTAs ma soo diri karaan faahfaahinta xiriirka ku filan ee martida, xaaladaha kale lacag-bixinta ayaa laga yaabaa in la ururiyey laakiin wax rajo ah oo la dejiyey ma jiraan marka la eego tallaabooyinka xiga. Cabashooyinka waxay bilaaban karaan dhowr todobaad kahor imaatinka marka aad martida ka codsato inuu bixiyo deebaajiga, ama dhowr maalmood ka hor haddii tilmaamaha soo-galitaanka aan weli lala wadaagin iyaga.
La socoshada macluumaadka uu martida kasta horey u heshay iyo hubinta inay helaan macluumaadka saxda ah waqtiga saxda ah ka hor imaanshahooda, inta ay joogaan, iyo baaritaanka kadib waxay noqon karaan dhibaato weyn. Haddii aan si sax ah loo dhammeyn, martida ayaa ku qanacsaneyn, tanina waxay ka tarjumaysaa qiimeynta iyo dib u eegista waxa aad bixisay.
Sidee xalka khibrada martida Zeevou u caawin karaa?
Zeevou wuxuu kuu ogolaanayaa inaad hagaajiso ka baaraandegista booskaaga, wax ku biirinaya khibrad marti ah oo ka sareysa. Adoo hubinaya in talaabooyinka martida ay tahay inay dhameystiraan ka hor inta aan la siinin gelitaanka guriga ayaa si cad loogu qeexay barta buuga soo gasho, filasho ayaa la dejiyaa martida waxay dareemayaan kalsooni in ay martigelinayaan nooc xirfadlayaal ah.
Kadib marka la dhammeeyo hadba tallaabada ballan qaadista ee aad go'aansato inaad dhaqaajiso (ururinta faahfaahinta martida, bixinta, deebaajiga amniga, iyo turxaan bixinta martida), martida ayaa kadib lagu wargalin doonaa in balansashadooda la xaqiijiyay. Laga bilaabo waqtigaas wixii ka dambeeya, waxaad bilaabi kartaa inaad u diyaariso joogitaankooda, adigoo la wadaagaya buug-gacmeed guri macluumaad ku saabsan waxa ay ka filan karaan dhismaha ama faahfaahinta ganacsiyada maxalliga ah iyo qodobbada soo jiidashada ee laga yaabo inay xiiso u yeeshaan.
Ku dhowaanshaha imaatinka, waad otomatayn kartaa dirista tilmaamaha is xaadirinta iyadoo la raacayo jadwalka waqtiga caadiga ah, oo ay kujirto awood u lahaanshaha ku lifaaqida hagaha soo-galitaanka guri kasta. Sidan oo kale, martidu ma dareemaan walaac ku saabsan sida ay marin u helayaan. Si aad ugu sii xaqiijiso heerkaaga adeegga, waxaad kari kartaa, tusaale ahaan, inaad adeegsatid mid ka mid ah qaab-dhismeedka asaasiga ah ee lagu bixiyo qayb ahaan fuulid Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad iska hubiso in martidu ku faraxsan tahay guriga, ama ay jiraan wax ay u baahan yihiin oo aad siin karto.
Iyada oo ay la socoto Zeevou, xulashooyinka waa kuwo aan xad lahayn. Marka la eego sharciyada kicinta ee sida buuxda loo hagaajin karo iyo sheybaarada ku saleysan isbeddelka, waxaad dhisi kartaa khibrad marti ah oo ku saleysan aragtidaada waxa ay noqoneyso!